Tour and activity information, photos and pricing for in Bangkok. Plan and book with Oway for cheap and affordable tours and activities. | Oway Bangkok - Hua Hin4Days SIC Trip - Tour and Activity in Bangkok | Oway
Tour Package in	Bangkok City, Thailand
Feature Tour	 Bangkok - Hua Hin4Days SIC Trip
Bangkok - Hua Hin4Days SIC Trip
1 x Adult(s) USD	419.00
ခရီးစဉ်တွင် ပါဝင်သော အရာများ• အသွားအပြန်လေယာဉ်လက်မှတ်
• ကြယ်သုံးပွင့်အဆင့်ရှိဟိုတယ်နှင့် နေ့စဉ်နံနက်စာ• သီးသန့်ကားခရီးစဉ်တလျှောက်• ဖော်ပြထားသော ၀င်ကြေးများ• ဖော်ပြထားသော မနက်၊ နေ့  ၊ ညစာ• ဒေသခံ ဧည့်လမ်းညွှန်• မြန်မာအုပ်စုခေါင်းဆောင်• Tip money
ခရီးစဉ်တွင်မပါဝင်သောဝန်ဆောင်မှုများ• ခရီးစဉ်တွင်မပါဝင်သောအခြားသောနေရာများအားသွားရောက်လိုခြင်းနှင့် အစားအသောက်များမှာယူသုံးဆောင်မှု• မိမိကိုယ်ပိုင်အသုံးစရိတ်များ၊ အချိုယမကာတယ်လီဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် အ၀တ်လျှော်ခစသည်များ• ဟိုတယ်အတွင်းရှိ Minibar အသုံးပြုမှုနှင့် အခပေးရုပ်သံလိုင်းများအား ကြည့်ရှုမှု ၊ အခပေးအင်တာနက် သုံးစွဲမှုများ• ခရီးသွားနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ အာမခံကြေး
ယူဆောင်သွားသင့်သည့်အရာများ• နေလောင်ခံအသားလိမ်းဆီ• နေကာမျက်မှန်• ကင်မရာ• နေ့စဉ်သောက်နေကျဆေးဝါး
ခရီးစဉ်ဖျက်သိမ်းမည့်အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာပေါ်ပေါက်လာပါက (1) လ ကြိုတင်၍အသိပေးအကြောင်းကြားရပါမည်။ အကယ်၍ (1) လ ထက်နောက်ကျသောခရီးစဉ်ဖျက်သိမ်းခြင်းများအတွက် အောက်ဖော်ပြပါခရီးစဉ်ဖျက်သိမ်းခအားလုံး အကျုံးဝင်ပါသည်။• လေယာဉ်လက်မှတ်ထုတ်ပြီးပါကလေယာဉ်လက်မှတ်၏ ၁၀၀% အပြည့်ကိုဧည့်သည်မှ ပေးချေရပါမည်။• ၁၅ ရက်မတိုင်ခင် ခရီးစဉ်ဖျက်သိမ်းလျှင် ခရီးစရိတ်၏ ၇၀% ကိုဧည့်သည်မှ ပေးချေရပါမည်။• ၁၄ ရက်အတွင်း ခရီးစဉ်ဖျက်သိမ်းလျှင် ခရီးစရိတ်၏ ၁၀၀% ကိုဧည့်သည်မှ ပေးချေရပါမည်။ အကယ်၍ ခရီးစဉ်စတင်ချိန်တွင် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ခရီးစဉ်မှ ထွက်ခွာမည်ဆိုပါကငွေပြန်အမ်းမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင် တည်းခိုစရိတ်များ၊ ပို့ဆောင်ရေးစရိတ်များ၊ အစားအသောက်စရိတ်များနှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုစရိတ်များ၏ တစ်ချို့တစ်ဝက် ကိုဖြစ်စေ၊ အပြည့်ကိုဖြစ်စေ Oway Tavel သည် ပြန်အမ်းရန်တာဝန်မရှိပါ.
သောကြာနေ့ (၂၄ ရက် ၊ မေလ ၊ ၂၀၁၉)	ရန်ကုန် - ဘန်ကောက် - ဟွာအင် နေ့လည်စာ ၊ ညစာ
ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ် မှ Oway အုပ်စုခေါင်းဆောင်နှင့် တွေ့ဆုံပြီးနောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေကြောင်းခရီးစဉ်ဖြင့် ဘန်ကောက်သို့ ထွက်ခွာပါမည်။ ထို့နောက် Thai Guide နှင့် တွေ့ဆုံပြီးနောက် ကားမောင်းချိန် ၂နာရီခန့် ကြာမြင့်ပြီး Hua Hin သို့ ရောက်ရှိပြီး Sheep Farm နှင့် Venezia တွင် Venice အသေးစားရှုခင်းများ နှင့် အမှတ်တရ ဓာတ်ပုံများ ရိုက်ကူးကြပြီး ဈေဆိုင်ခန်းများ Amusement များကို ၀င်ရောက်လေ့လာကြပါမည်။ သို့ ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။ ထို့နောက် ညစာကို ဒေသခံ စားသောက်ဆိုင်တွင် သုံးဆောင်ပြီးနောက် တစ်ညတာ အေးချမ်းစွာ အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
စနေနေ့ (၂၅ ရက် ၊ မေလ ၊ ၂၀၁၉)	ဟွာအင် - ဘန်ကောက် နံနက်စာ ၊ နေ့လည်စာ ၊ ညစာ
ဟိုတယ်တွင် မနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက် santorini ဂရိရဲ့အငွေ့အသက်များနှင့် ဈေးဆိုင်ခန်းများ အဆောက်အအုံးများ ခံစားအပန်းဖြေ ကြပါမည်။ထို့နောက် hua hin view point သို့ ပို့ဆောင်ပေးပြီး ဘန်ကောက်သို့ ဆက်လက်ထွက်ခွာပါမည်။ ဘန်ကောက်တွင် လွတ်လပ်စွာ ဈေးဝယ်နိုင်ရန် MBK သို့ ပို့ဆောင်ပေးပါမည်။ ထို့နောက် ညစာ သုံးဆောင်ကြပြီး တစ်ညတာအေးချမ်းစွာ အိပ်စက်အနားယူပါမည်။
တနင်္ဂနွေနေ့ (၂၆ ရက် ၊ မေလ ၊ ၂၀၁၉)	ဘန်ကောက် - မြဘုရား - shopping နံနက်စာ ၊ နေ့လည်စာ ၊ ညစာ
ဟိုတယ်တွင် မနက်စာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ တန်ခိုးကြီး ဘုရားတစ်ဆူဖြစ်သော Emerald Buddha ခေါ် မြဘုရားအား သွားရောက်ဖူးမျှော်ပါမည်။ ဆက်လက်၍ အနောက်တိုင်းဗိသုကာ လက်ရာများ ပေါင်းစပ်ထားသော ထိုင်းဘုရင့် နန်းတော်သို့ သွားရောက်လည်ပတ်ပြီး အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံရိုက်ပါမည်။ ထို့နောက် လွတ်လပ်စွာ ကစားနိုင်ရန် Dream World သို့ ပို့ဆောင်ပေးပြီး Snow Town တွင်လည်း နှင်းလျောစီးရင်း ပျော်ရွှင်စွာ ကစားကြပါမည်။
တနင်္လာနေ့ (၂၇ ရက် ၊ မေလ ၊ ၂၀၁၉)	ဘန်ကောက် - ရန်ကုန် နံနက်စာ
ဟိုတယ်တွင် မနက်စာ သုံးဆောင်ပြီးနောက် ထို့နောက် လေဆိပ်သို့ ပို့ဆောင်ပေးပြီး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေကြောင်းလိုင်းဖြင့် ရန်ကုန်သို့ အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ပြန်လည်ရောက်ရှိပါမည်။